नेप्सेमा १२ करोड ७९ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचिकृत, कुन कम्पनीको कति ? (सूचिसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > नेप्सेमा १२ करोड ७९ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचिकृत, कुन कम्पनीको कति ? (सूचिसहित)
नेप्सेमा १२ करोड ७९ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचिकृत, कुन कम्पनीको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । माघ महीनामा मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा १२ करोड ७९ लाख ८० हजार ७९० दशमलव ७ कित्ता शेयर थपिएको छ । ग्लोबल र जनता बैंक मर्जरपछिको शेयरसहित नेप्सेमा उक्त कित्ता शेयर थपिएको हो ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी शेयर ग्लोबल आईएमई बैंकको मर्जरपछिको शेयर सूचीकृत भएको हो । ग्लोबलले मर्जरपछिको ७ करोड २० लाख ८७ हजार ८१ दशमलव १८ कित्ता शेयर माघ १ गते नेप्सेमा सूचिकृत गराएको थियो । हाल यस कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २८६ कायम भएको छ ।
माघ महीनामा दुई कम्पनीको ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा ऋणपत्रको पनि कारोबार शुरू भएको अवस्थामा प्र्रभु बैंकले १० लाख कित्ता र सन्राइज बैंकले ३० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचीकृत गराएका हुन् । प्रभु बैंकको ऋणपत्र माघ ६ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
सनराइज बैंकले भने माघ ७ गते ऋणपत्र सूचीकृत गराएको हो । हाल ऋणपत्रको कारोबार फाट्टफुट्ट भए पनि यसको मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट आधार तयार गर्ने काममा नेप्से जुटेको छ । ऋणपत्रको बजार विस्तारका लागि चाँडै नै आधार तयार गर्ने नेप्सेले जानकारी दिएको छ ।
यो महीनामा सूचीकृत हुने अधिकांश शेयर बोनस शेयर रहेका छन् । ग्लोबलको मर्जर, प्रभु र सनराइजको ऋणपत्र तथा सिर्जना फाइनान्सको हकप्रद शेयर बाहेक अन्य कम्पनीको शेयर भने बोनस शेयर छ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कम्पनीहरूले वितरण गरेको बोनस शेयर कारोबार योग्य बनाउन नेप्सेमा सूचीकृत गराएका हुन् । समाचार स्रोत :आर्थिक अभियान दैनिक
२०७६ फागुुण २५ गते १०:४७ मा प्रकाशित
नेप्सेको कारोबार मंगलबारदेखि मात्रै
रामदेबको पतञ्जली आयुर्वेदिक केन्द्रद्धारा उत्पादित औषधि नेपालमा प्रतिबन्ध !
नेपाल सेवा लघुवित्तको आईपिओमा ८२ गुणा बढी आवेदन
सिप्रदीले ल्यायो टाटा एस मेगा
सेयर बजारमा उछाल : एकै दिन ४२.६१ अंकले वृद्धि, १ अर्ब ३३ करोडको कारोबार